Nhau - Embroidery ndiro izwi rakajairika remhando ipi neipi yekushongedza yakashongedzwa pamucheka une tsono neshinda.
Embroidery ndiro izwi rakajairika remhando ipi neipi yekushongedza yakashongedzwa pamucheka une tsono neshinda. Kune maviri marudzi ekushongedzwa: sirika yakashongedzwa uye minhenga micheka. Mune iyo silika kana imwe shinda kana shinda dzakabayiwa netsono ine imwe dhizaini uye ruvara pane zvakashongedzwa uye mavara anobayiwa netsono kuti aumbe pateni yekushongedza. Ndihwo hunyanzvi hwekuwedzera dhizaini yevanhu uye kugadzira kune chero jira riripo uchishandisa tsono uye shinda. Embroidery, iyo ine nhoroondo yemakore angangoita zviuru zviviri kana zvitatu zvemakore muChina, ndeimwe yetsika dzechiChinese dzemaoko.
Yedu yekushongedza iri kushandisa zvirimwa, maruva uye katuni pateni yakashongedzwa mumatatu-mativi madziro akarembera, pillowcases, girazi, wallet, headwears, magemenzi, mhete, mhete, talismans - masiki, hengechepfu, nezvimwewo, iyo embroidery irudzi rwechinhu chinoita kuti Chekutanga chinhu iyo icing pakeke, kwete chete inoratidza iyo Embroidery nhanho yemusoni, zvakare gadzira zvimwe zvisina kujairika zvinhu zvakawedzera zvakanyanya kutsamwa. Rondedzero nemutsara wakanaka wekushongedza mashandiro, ichijekesa runako rwakasiyana.
Embroidery ine mweya, kuravira kwehupenyu, yakajeka uye inowirirana ruvara, kushomeka kusingaperi kwekufungidzira nzvimbo. Embroidery ndiyo rwiyo rwerudo, kutaura kwakapfava kwetsono uye shinda, jira risina chinhu rakapihwa kurudziro, hupfumi uye hwakajeka fungidziro hunoshongedza hupenyu husina kusarudzika, uye kuvaka nzvimbo yekurota uye nhetembo nguva. Iyo pasuru yezvinhu inosanganisira yakadhindwa yakashongedzwa machira, yakashongedzwa shinda, yakashongedzwa tsono, yakadzama dhizaini mirairo. Zvigadzirwa hazvisati zvapedzwa, zvinoda kugadzirwa nemaoko, zvakakodzera vatangi kuti vatange, Shamwari dzinotamba nesingano uye tambo kekutanga, usazvidya moyo, zvigadzirwa zvekushongedza zvakagadzirwa neepamusoro-tsananguro vhidhiyo yakazara dzidziso, tevera vhidhiyo inogona kupedzwa, rega iwe uye nekushongedza zero nzvimbo yekuonana. "Nyika haisi kushayikwa kwekunaka, kungoshaya maziso ekuwana runako", zvinhu zvakajairika, zvinogara zvichiratidzwa nemoyo wakabatikana.
Pamwe hupenyu hausi hwese hwakanaka, asi chero bedzi paine rudo rwehupenyu, uchifara kugadzira moyo wakanaka, ipapo zvishoma nezvishoma, hupenyu huchave zvaunoda. Chero bedzi moyo, zvinhu zvakajairika zvakare zvinogona kuve zvakajairika, sekureba sekuda pamoyo, hupenyu hwakajairwa huchapihwa chirevo chayo chakasiyana!